China Chlorine Dioxide Tablet fanamboarana sy orinasa | FIZA
Anarana simika: Chlorine Dioxide Tablet
CAS tsia .: 10049-04-4
Properties: Ny takelaka diôzônia kôlônia dia takelaka klôro diôdiômazy mitambatra azo entina, tsy mipoaka, raha vao ampiana rano iray manokana, dia mihetsika haingana sy azo antoka ao anaty vahaolana klôro dioksida mahery.
1.Vahaolana mahery vaika mahery vaika klôro dioksida eo an-toerana.
2.Tsy misy fampiasam-bola na famatsiana herinaratra ho an'ny taranaka ilaina.
3.Ny hevitra azo antoka dia ampitahaina amin'ny vokatra klôro dioxide hafa.
4.Simple fampifangaroana tsotra ho an'ny mpampiasa farany sy tsy matihanina.
5.Mivaha haingana amin'ny rano mafana sy mangatsiaka.
6. Ny takelaka SY Chlorine Dioxide rehetra dia takelaka misy rano ao anaty rano.
7.Chlorine Dioxide Tablets avy any Shina dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana 100+.
Size sy fonosana
Fonosana 1kg / be indrindra; 1g / takelaka, 4g / takelaka, 10g / takelaka, 20g / takelaka, 100g / takelaka, 200g / takelaka, na arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
1. Vorona akoho, tsenan-ronono, tsenan-kisoa
Ny takelaka dioksidan'ny klôro dia azo ampiasaina amin'ny turkey, broiler, layer, fotodrafitrasa mpiompy; sy toerana fanaovana ronono, omby ary omby; ary mamafy ihany koa, akanin-jaza ary fanatontosana trano hanatsarana ny vokatra azo. Ny kalitaon'ny rano sy ny tsy fahampian'ny rano dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny famokarana sy ny fahasalaman'ny biby. Amin'ny toe-javatra misy rano ho an'ny akoho amam-borona dia misy loto, tokony hamporisihina ny fitsaboana rano.
FAMPIHARANA ARA-PISAovana tabilao DIOXIDE CHLORINE
• Fisotroana akoho amam-borona Rano fanesorana rano.
• amin'ny fiompiana akoho / fiompiana akoho amam-borona
• Fanesorana biofilm.
• Fanadiovana CIP.
• Famonoana otrikaretina amin'ny rivotra (rindrina lena).
• Fogging / famafazana.
• Fanosehana tsipika.
• Fitsaboana otrikaina sy famahanana.
• Fanasana sy fahadiovana amin'ny ankapobeny.
NY SOA NY SOA FOMBA FANANAN-KEVITRA DINOXIDA CHLORINA ho an'ny SISTEMAN'NY RANOM-POAKA.
• Famonoana otrikaina haingana sy malalaka ho an'ny rafi-pisotro rano.
• Mahomby amin'ny sakany pH (4-10).
• Tsy dia manimba firy noho ny klôro.
• Efa mandaitra amin'ny tahan'ny doka ambany.
• Oksidizer mahery ao anaty rano.
• Manala ny biofilm amin'ny tsipika rano.
• Tsy misy ny famokarana vokatra vita amin'ny klorigo.
2. Ny takelaka dioxide klôro dia azo ampiasaina amin'ny filomanosana Pool & Spa
Ny dioksidan'ny klôro dia afaka manadio sy manadio ny pisininao, kovetabe mafana, Jacuzzi na spa. Ny diôdômanina klôro dia mamono tanteraka ny rano anaty dobo filomanosana, manala ny fotaka sy ny biofilm amin'ny rafitra mivezivezy ary mitazona ny fantsom-pahadiovana ho madio. Izy io dia mifanaraka amin'ny rafitra rehetra. Ankoatra izany, mihetsika haingana izy io: mamono bobongolo, holatra ary holatra ao anatin'ny 60 segondra. Arovy amin'ny mikraoba mampidi-doza ao anatin'izany ny legionella, giardia ary cryptosporidium.
Previous: Fire Assay Cupel
Manaraka: Chlorine Dioxide Iray vovonan'ny singa
Takelaka misy ny Chlorine Dioxide
Clo2 Takelaka Chlorine Dioxide